Shir lagu qiimayanayay waxqabadka xafiisyada maaliyadaha iyo wakaaladaha dakhliga deegaanada dalka oo abaalmarin ku salaysan waxqabadka xafiiska maaliyada iyo horumarinta dhaqaalaha DDSI lagu gudoonsiiyay. - Cakaara News
Shir lagu qiimayanayay waxqabadka xafiisyada maaliyadaha iyo wakaaladaha dakhliga deegaanada dalka oo abaalmarin ku salaysan waxqabadka xafiiska maaliyada iyo horumarinta dhaqaalaha DDSI lagu gudoonsiiyay.
Maqala(CN) Khamiis.Jan.2015, Shirka qiimaynta waxqabadka xafiisyada maaliyadaha iyo wakaaladaha dakhliga deegaanada dalka oo ay si wada jir ah u soo diyaariyeen wasaarada maaliyada iyo horumarinta dhaqaalaha JDFI iyo wakaalada dakhliga JDFI ayaa ka dhacay caasimda deegaanka Tigreega ee Maqala. Shirkaa oo ay ka soo qaybgaleen masuuliyiin ka socotay wasaaradaha maaliyada iyo horumarinta dhaqaalaha JDFI, wakaalada dakhliga JDFI iyo masuuliyiinta xafiisyada maaliyadaha deegaanada iyo wakaaladaha dakhliga deegaanada iyo waliba 2 ismaamul magaalo.
Waxaana diirada lagu saarayay shirkan qiimaynta ah waxqabadka rubucyadii ugu danbeeyay ee ay qabteen xafiisyadaasi gaar ahaan hirgalinta habraacyada miisaaniyadaha, nidaamka habsami u socodka iyo hirgalinta shuruucaha maaliyadaha dalka.
Haddaba warbixintii waxqabadka xafiiska maaliyada iyo horumarinta dhaqaalaha DDSI oo uu soo jeediyay wasiir ku xigeenka maaliyada iyo horumarinta dhaqaalaha DDSI mudane Jamaal faarax warmooge ayaa markii la dhagaystay lana odorosay waxqabadka uu muujiyay rubucyadii ugu danbeeyay xafiiska maaliyada iyo horumarinta dhaqaalaha DDSI ayaa waxaa la cadeeyay in uu xafiisku yahay haldoor ku dayasho mudana, kaalmaha ugu horeeyana kaga jiro dhamaanba xafiisyada maaliyadaha ee deegaanada, sidaasi darteena uu mudan yahay in abaalmarin la gudoonsiiyo uu ku mutaystay waxqabadka wanaagsan ee uu muujiyay.
Waxaana abaalmarintaasi ay wasaarada maaliyada ee JDFI ay gudoonsiiyay wasiir ku xigeenka maaliyada iyo horumarinta dhaqaalaaha DDSI mudane Jamaal faarax warmooge.
Isku soo wada xooriyoo xafiiska maaliyada iyo horumarinta dhaqaalaha ayaa rubucyadii ugu danbeeyay guulo waawayn ka soo hooyay hirgalinta qorshayaasha horumarineed, kor u qaadida koboca dhaqaalaha meel marinta nidaamka diyaarinta iyo hirgalinta qorsho natiijo leh,